रिडी हाइड्रोपावर : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, बैशाख २६, २०७६)
गतवर्षको मुनाफाबाट ६ प्रतिशत बोसन शेयर वितरण गरी रू. ५३ करोड ११ लाख १८ हजार चुक्तापूँजी पु¥याएको रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म रू. ७६ लाख ५१ हजार खुद नाफा कमाएको छ । यस अवधिमा कम्पनीले विद्युत् विक्रीबाट रू. १ करोड १५ लाख ९७ हजार आम्दानी गरेको छ ।
कम्पनीको जगेडा कोषमा रू. २ करोड ९६ लाख छ । दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयरमूल्य अंकित मूल्यभन्दा कम छ । बुधवारको कारोबारमा अघिल्लो दिनभन्दा ३ अंक घटेर अन्तिम मूल्य रू. ९४ कायम भएको छ । यस दिन कम्पनीको २५ हजार ७४६ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
2019-05-09 - 70 view(s) - abhiyan